डा. केसीलार्इ सिन्धुपाल्चाेककी चेलीकाे खुल्ला पत्र – Waikhari
गृहपृष्ठ बिचार डा. केसीलार्इ सिन्धुपाल्चाेककी चेलीकाे खुल्ला पत्र
डा. केसीलार्इ सिन्धुपाल्चाेककी चेलीकाे खुल्ला पत्र
गोविन्द केसी डाक्टर साप,
तपाईलाई नेपाली चेलीको नमस्कार …।
तपाईं महान् हुनुहुन्छ डाक्टर साप किनकि तपाई लगातार २३ दिन सम्म केहि नखाई अनसन बस्दै हुनुहुन्छ नेपाली जनताका लागि । मलाई थाहा छ तपाईमा केही स्वार्थ छैन । स्वार्थ छ त केवल आम नेपालीको सुख र सुस्वास्थ्यको ।
तपाईंलाई सप्तरीको बाढिपिडित मात्रै होइन, जाजरकोटको झाडापखाला ग्रसितको मात्रै पनि होइन, जुम्लाका निमुखा जनताको पनि चिन्ता छ, आम नेपाली जनताको चिन्ता छ । हो, म बुझ्दछु तपाई चाहनु हुन्छ एउटा गरिब नेपालीको छोराछोरीले सर्वसुलभ ढंगबाट डाक्टर पढ्न पाओस् । छोराछोरी पढाउनका लागि बाउबाजेका पुख्र्याैली सम्पत्ति बेच्नु नपरोस् । जागिरेहरुले हाकिमको गाली सहँदै र सेवाग्राहीको सराप खाँदै जोडेको तिन कोठे घर बेच्नु नपरोस् । तपाई चाहनुहुन्छ नेपाल मै गुणस्तरीय कलेज स्थापना होस् र भएको कलेजको स्तर बृद्धिहोस् । हामी गरिब जनताले त तपाईलाई भगवान सरह नै मान्नुपर्छ र मानेका पनि छौं ।
देशको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिको अन्त्य चाहनु हुन्छ तपाईं । मेडिकल माफियाको चंगुलबाट कलेजहरुलाई उम्काउन चाहनुहुन्छ । राज्यले सुविधा सम्पन्न कलेजको व्यवस्थापन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ।
हो यी कुरा तपाईंले मात्रै चाहेको होइन, आम जनताले चाहेको यही हो । आम नेपालीले अहिलेको सरकारबाट यहि चाहन्छन् । अझ भनौं भने म त अरु थुप्रै मेडिकल कलेज खुलुन् भन्ने चाहन्छु । अनि ती कलेजहरु सुविधा सम्पन्न होउन् । अन्तराष्ट्रिय मापदण्डका होउन् । मेडिकल कलेज मात्रै होइन अरु थुप्रै विषयका कलेज खुलुन् नेपालमा । नेपाली विद्यार्थीले मात्रै होइन विश्वका धेरै विद्यार्थीको रोजाइ नेपाल बनोस् । विश्व समुदायको लागि एजुकेसन हब नेपाल बन्न सकोस् ।
तपाईंलाई थाहा होला डाक्टर साप, सन् २०१५ मा अमेरिकामा मात्रै ९६६२ जना नेपाली विद्यार्थी भर्ना भए । अमेरिकामा मात्रै होइन नेपाली विद्यार्थी भारत, बंगलादेश, युरोप, चाइना र अष्ट्रेलिया लगायतका थुप्रै देशमा गएका छन् । पचासौं हजार नेपाली पढ्न कै लागि विदेशिएका छन् स्टुडेन्ट भिसामा ।
एकपटक हिसाब गर्नुस् त डाक्टर साप, यी विदेशीएका विद्यार्थीले विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा कति डलर भुक्तानी गर्नुपर्छ । म चाहन्छु नेपाली विद्यार्थीले यसरी डलर बुझाएर पढ्नु नपरोस् । बरु १० हजार विद्यार्थी अमेरिका पठाउनुको सट्टा ५०० जना अमेरिकन प्रोफेसरहरु नेपाल झिकाउँ । नेपालका थुप्रै ठाउँहरुमा सयौं विषयका कलेज खोलौं । नेपालको प्राकृतिक र साँस्कृतिक सुन्दरता भित्र आफ्ना विद्याथीहरु पठाउन र उनका लागि कोटा बढाउन अमेरिकी र युरोपेली एजेन्टहरुको भिड काठकाडौंमा देखियोस् । चाइनिज र अष्ट्रेलियनहरु उनका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दियोस् भन्दै लाम लागुन् । अनि नेपाली विश्वविद्यालयका सर्टिफिकेटको मान्यता विश्वभर अब्बल रहोस् ।
म चाहन्छु नेपालका विश्वविद्यालयमा पढ्नका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा होड बाजि चलोस् । फरक यत्ति हो डाक्टर साप, तपाईं अरु कलेज खोल्न नदिन चाहनुहुन्छ र १० बर्ष सम्म नीतिगत बन्देज लगाउन चाहनुहुन्छ । म अझै धेरै कलेजहरु खुलुन्, अझ धेरै विश्वविद्यालयहरु खुलुन् भन्ने चाहन्छु ।
आमजनताले चाहेको कुरा तपाईंले एजेण्डा बनाउनुभो । सत्याग्रह शुरु गर्नुभो । त्यो पनि एकपटक होइन पटकपटक, अहिलेसम्म त १५ पटक भैसक्यो । हामी महिलाहरु वर्ष दिनमा एकपटक एक दिन भगवानको पुजा गर्नका लागि व्रत बस्दा त राति उठेर दिनभरीकालागि डोज पुग्ने गरी खानुपर्छ तर तपाईं १५ औं पटक त्यो पनि २३ दिन वितिसक्दा पनि भोकै बस्नुभएको छ ।
मैले मात्रै होइन हामी तमाम महिलाहरुले तपाईंलाई अचम्म मान्दै हेरिरहेकाछौं । यत्रो दिन सम्म तपाईं कसरी भोकै बस्नुभएको छ, त्यो पनि अरुका लागि । हो तपाईं बृद्ध हुनुहुन्छ, तपाईंको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भैरहेको छ । तपाईंले उठाएका माग आम समुदायको हितमाछन् । जनताकोे पक्षमाछन् । तर पनि तपार्इंं किनभोकै बस्नुभएको छ डाक्टर साप? मैले त तपाईंमा अद्भुतशक्ति देखेको छु किनकि अरुहरु अनसनबस्दा २ दिनमा नै अनसन तोडाउन कोहि आइ दिइहाल्नुपर्छ ।
नन्द प्रसाद अधिकारीले त मृत्युबरण नै गर्नुपर्यो, गंगामायाको पनि हालतअत्यन्तै कमजोर भएको थियो । तर तपाईंको अनसन २३ औं दिन वितिसक्दा पनि ६२ वर्षे शरीरमा उर्जा देखिन्छ किन? कितपाईं देखावटि अनसनमात्रै बस्नुभएको छ ? कितपाईं मुखबन्द गरेपनि नसामा सलाइन रोपेर त्यसैबाट खाइ रहनुभएको छ ? कि डाक्टर भएर अनसनबस्दा मरिन्न? यो शंका म मामात्रै होइन म जस्ता धेरैमा छ डाक्टर साप ।
अनि तपाईंले उठाएको माग जति जायज छन् नि त्यति नै तपाईंको अभिव्यक्ति र माग पेश गर्ने अनि समाधानको बाटो पनि गलत नै छ । किनभने मैले भोट हालेर चुनेका सांसदहरुले कानुन बनाउन नपाउने ? तपाईंले भनेकै कुरा आमजनता कै पक्षमा कानुन बनाउन जनताका प्रतिनिधिले छलफलगर्न पनि नपाउने ? तपाईंले भनेका शब्दमात्रै राखेर कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने छ ?
मैले मेरा प्रतिनिधिमार्फत् मेरा कुरा समेट्न नपाउने ? यो कस्तो प्रकृया हो डाक्टर साप? म तपाईंलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु । सरकार वार्ता गरौं भन्छ, तपाईं वार्ता गर्न आउने मान्छेको अनुहार रोजेर बस्नुहुन्छ । तपाईं सत्याग्रह भन्नुहुन्छ, तपाईंका समर्थक ढुंगा हान्छन्, कुर्सि प्रहार गर्छन् । के यस्तो आक्रमणपनि सत्याग्रह भित्रै पर्छ र डाक्टर साप? तपाईंको पछि लाग्नेले अस्पताल बन्दगर्दा ११ महिनाको कलिलो दुधे बालकको ज्यान गुमाउनु पर्यो । यसको जिम्मेवारी पनि तपाईंले लिनुपर्छ ।
तपाईंलाई त थाहा छैन होला पुत्र वियोगको पिडा कस्तो हुन्छ भनेर किन कि तपाईंको न श्रीमति छ न छोराछोरी । ती बालककी आमालाई सोध्नुस् डाक्टर साप कत्तिको पिडा भयो भनेर ।
म चाहन्छु उनको आँसुको श्रापतपाईंलाई नलागोस् । तपाईंलाई सत्याग्रह कस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा रहेनछ । सोध्नुस् अन्नाहजारेहरुलाई, गान्धिको इतिहास पढ्नुस् । अनितपाईंलाई सत्याग्रह नै गरिरहेछु भन्ने लाग्दछ भने सोध्नुस् तपाईंका अघिपछि हिड्नेलाई केके गर्यौ भनेर । कि तपाईं अनसन बस्ने अनि समर्थकहरु ढुंगाहान्ने सल्लाह नै भएको छ ? तपाईंको माग जनताको पक्षमा हुँदा हुँदै पनितपाईंलाई कसैले प्रयोग गरिरहेको पनि हुनसक्छ, विचार गर्नुस् डाक्टर साप ।
हो, मैले भोट हालेका प्रतिनिधिहरु तपाईंले जति पढेका छैनन् होला तर उनीहरुमा विवेक भने पक्कै छ । मलाई लाग्छ तपाईंको सेतो कोट भित्रका ला किराहरु झुण्डिएका पनि हुन सक्छन् । ती किराहरुले तपाईंलाई पनि डस्न सक्छन् होशियार हुनुस् डाक्टर साप । सेतोकोट लगाउने तपाईं जत्तिको महान् व्यक्तिको शरीरमा आरोप प्रत्यारोपको कालो नपोतियोस् । सुकिला कपडामा घिन लाग्दो दाग नलागोस् । मलाई थाहा छ डाक्टर साप, सेतो कपडामा लागेको दाग हत्तपत्त मेटिन्न । त्यसैले वार्ता गर्नुस् र कथित अनसन तोड्नुस् डाक्टर साप । तपाईंको माग हाम्रो पनि मागहो । कसैको गोटि बनेर होइन, आफ्नै स्वाभिमानले, आफ्नै प्रयासले अनिआफ्नै हातेमालोबाट माग पुरा गर्नुस् । धन्यवाद ।
मञ्जु नेपाल भण्डारी,